BIM - isbeddelka aan laga noqon karin ee CAD - Geofumadas
Nofeembar, 2015 AutoCAD-AutoDesk, Featured, Geospatial - GIS, Microstation-Bentley, egeomates My
Marka la eego qaab-dhismeedka Geo-Engineering, maahan wax cusub Wakhtiga BIM (Qaabeynta Qaab dhismeedka Macluumaadka Dhismaha), oo u oggolaaneysa walxaha nolosha dhabta ah in lagu daydo, kaliya maahan matalaadooda garaafadeed laakiin marxaladaha kala duwan ee wareegga nolosha. Waxay ka dhigan tahay in waddo, buundo, waal, kanaal, dhisme, laga soo bilaabo fikradeeda ay yeelan karto feyl tilmaamaya, kaas oo ka kooban naqshadiisa, habka dhismaheeda, saameynta deegaanka dabiiciga ah, howlgalka, isticmaalka, tanaasulka, dayactirka, wax ka beddelka, qiimaha lacagta ee waqtiga iyo xitaa dumintiisa.
Iyadoo la adeegsanayo habka fikradaha fikirka ka bixinaya arrintan, dariiqa bislaanshaha ee BIM waxay la xiriirtaa horumarinta wax-soo-saarka lagama maarmaanka u ah horumarintiisa, awoodaha kooxaha si ay u qabtaan una maareeyaan macluumaadka (cusub iyo mid jira), hirgelinta heerarka caalamiga ah, kaabayaasha xogta iyo tusaalaynta geeddi-socodka isbeddelada kala duwan ee la xiriira maareynta dhulka. Caqabada BIM waxay tahay inay gaarto waqti ay kujirto xiriir asal ah PLM (Maareynta Lifecycle Management), halkaasoo waxsoosaarka waxsoosaarka iyo adeegyadu ay rabaan inay maareeyaan meertada la midka ah, in kasta oo ay jiraan baaxado aan daruuri ahayn inay kujiraan dhinaca geospatial.
dhibic ka mid ah wada oo ka mid ah laba marinnada (BIM + PLM) waa fikradda ah magaalooyinka smart (Smart Cities), halkaas oo shirkadaha ugu waaweyn waxaa iska fogeeya, oo sidaas daraaddeed baahida deg deg ah ee magaalooyinka waaweyn sida irreversibility in farsamada iyo tiknoolijiyada aadanaha ee aan la isku hallayn karin ee ku salaysan go'aan qaadashada.
Hoos waxaa ku xusan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan waxyaabaha aasaasiga ah iyo horumarka ee la xiriira BIM iyo xiriirka ay la leedahay qalabka teknoolajiyada ee isticmaalka caanka ah.
Bew iyo Richards waxay abuuraan wadada horumarka ee BIM ee afar heer, oo ay ku jiraan Heerka Zoom, sida lagu muujiyey garaafka. Si loo caddeeyo, in tani ay tahay waddo ka soo horjeeda istaandarka, ma aha wax badan oo korsashada dunida, taas oo ay jiraan wax badan oo laga hadlo.
BIM Heerka 0 (CAD).
Tani waxay u dhigantaa Naqshadeynta Kumbuyuutarka, oo laga arkay astaamihii hore ee aan ku aragnay 80-naadkii. Waqtiyadaas, mudnaantu waxay ahayd in la qaado sawirka farsamada ee horay loogu sameeyay qorshooyinka, si loo dhejiyo lakabyo. Waxaan xusuusineynaa tusaale ahaan dhalashadii AutoCAD iyo Microstation ee waqtiyadan, taas oo aan laga gaabin tallaabada weyn, aan waxba ka qaban Sawirada; kordhintoodu waxay tiri sidaas (Sawiridda DWG, Naqshadeynta DGN). Waxaa laga yaabaa in softiweerka kaliya ee horey u arki jiray wixii intaa dhaafsiisan uu ahaa ArchiCAD, oo tan iyo 1987 ka hadlay Dhismaha Virtual, iyadoo la quudhsanayo inuu asal ahaan ka soo jeedo Hungary sannadihii dagaalkii qaboobaa. Sidoo kale marxaladdan waxaa ku jira maaraynta xogta aan juquraafiga ahayn ee laga helo codsiyada kale ee la xiriira maareynta mashruuca, tusaale ahaan Miisaaniyadaha, Qorsheynta, maamulka sharciga, iwm.
BIM Heerka 1 (2D, 3D).
Tani waxay dhacdaa tobankii sano ee la soo dhaafay, qaangaarka goobta shaqada oo horey loogu magacaabi karo 2D. Dhismaha aagga 3D sidoo kale wuu bilaabmayaa, in kasta oo marxaladihiisii ​​hore, waxaan xasuusan karnaa sida ay u dhib badneyd inay ku sameyso AutoCAD R13 iyo Microstation J. Waxaa jiray muuqaalo shaqo oo saddex-cabbir ah, laakiin wali waxay ahaayeen vector ka kooban arcs, node, wajiyo iyo kooxaysiga kuwan. Xaalada AutoDesk, noocyada sida SoftDesk fikradaha isku dhafan sida sagxadaha ilaa AutoCAD 2014, oo qaababka wadooyin iyo falanqaynta goobta lagu sameeyay, laakiin wax walba waxay ka dambeeyeen sanduuq madow oo xalalka sida EaglePoint ay sameeyeen waxbadan «midab leh«. Microstation waxay horeyba ugujirtay Triforma, Geopack iyo AutoPlant oo ku hoosjira caqli isku mid ah, oo leh isku xirnaansho xagga caynka ah oo ah noocyada iskuxiraha isku xidhka iyagoon lahayn iswaafajin la isku raacsan yahay.
toban sano Tani, inkasta oo in ay jirto xataa lagu daydo iyo walxaha caadiga ah fikrad la xaqiijiyay in xaqiiqda la qabsashada waddanka xoogaa qasbay xal toosan for AEC ka labada dhinac saddexaad, oo ay ku jiraan Architecture, Dhismaha, Geospatial Warshadaha, Warshadaha iyo Animation helay.
AutoDesk kama uusan hadlin BIM illaa laga soo iibsado Revit-ka sanadkii 2002, laakiin isdhexgalka xalalka sida Civil3D ayaa qaadata waqti aad u dheer. Marka laga hadlayo Bentley, soo gelitaanka mashruuca 'XFM (Extensible Feature Modelling)' ee 'Microstation 2004' waa mid muhiim ah iyo inta lagu guda jiro kala guurka ee loo yaqaan XM, aaladaha saddexaad sida Heastad, RAM, STAAD, Optram, Speedikon, ProSteel, PlantWise, RM- LEAP Bridge iyo HevaComp. Sannadkii 2008 Bentley wuxuu bilaabay Microstation V8i, halkaas oo XFM uu ku bislaanayo I-model-ka heerka iskaashiga.
BIM Heerka 2 (BIMs, 4D, 5 D)
Waxa ugu adag marxaladan BIM Heerka 2 waxay ahayd jaangoyn; Gaar ahaan tan iyo markii shirkadaha gaarka loo leeyahay xirtaan qaansooyinkooda oo ay rabaan inay ku qasbaan dadka kale inay adeegsadaan rabitaankooda. Marka laga hadlayo barnaamijka softiweerka, wuxuu ahaa softiweer bilaash ah oo xoog u sameeyay jaangoyn lagu sameeyo heerka la isku raacsan yahay ee ay 'Open Geospatial Consortium OGC' hadda mataleyso. Laakiin goobta CAD-BIM, ma jirin wax hindise ah OpenSource, sida in ilaa maanta software-ka kaliya ee bilaashka ah ee kara kara inuu bislaado uu yahay LibreCAD, kaas oo kaliya ku jira Heerka 1 -haddii aysan ahayn in laga tago 0 Heerka. Shirkadaha gaarka loo leeyahay waxay sii daayeen noocyo bilaash ah, laakiin jaangoynta BIM waxay ahayd mid gaabis ah, codka dadka qaar sababtoo ah kaligi talisnimada boqortooyada.
Ku darsiga Ingiriisku waa mid muhiim ah, in caado ay u leeyihiin inay wax walba u qabtaan dhinaca kale, ay u horseedday Heerka Ingiriiska, sida BS1192: 2007 iyo BS7000: 4 codes; Kuwani waa kuwo aad u duqoobay laga bilaabo diyaaradaha waraaqaha illaa Heerka BIM 1. BS8541: 2 horeyba waxay uga muuqatay qaabka dhijitaalka ah iyo tobankan sano BS1192: 2 iyo BS1192: 3.
Waa la fahmi karo sababta BentleySystems u samaysay Shirkadda Wax-qabadka Infrastructure iyo abaal-marinteeda ee London, 2013, 2014, 2015 iyo 2016; iyo sidoo kale iibsashada shirkadaha leh portfolios sare sare ee macaamiisha British -Xitaa waxaan ku kalsoonahay in aan ka fekerayo dhaqdhaqaaqa xarunta dhexe ee Yurub ee Holland ilaa Ireland-.
Ugu dambeyntii, qaabka OGC, waxaa suurtogal ah in horay loo maro heerar dhowr ah oo oggolaansho isku raacsan oo tilmaamaya BIM, gaar ahaan GML, kuwaas oo tusaalayaal sida InfraGML, CityGML iyo horumarinta UrbanGML.
In kasta oo dadaallo badan oo hadda socda tobankan sano ee BIM Heerka 2 ay isku dayaan inay gaaraan maareynta meertada nolosha ee moodooyinka, weli looma tixgelin karo inay yihiin kuwo dhammaystiran ama la jaangooyey, iyo sidoo kale deymaha taagan ee 4D iyo 5D oo ay ku jiraan Barnaamijyada Dhismaha iyo Qiyaasta Dynamic. Isbedelada isku imaatinka edbinta ayaa ka muuqda isku biiritaanka / helitaanka shirkadaha iyo aragtida guud ee dejinta.
BIM Heerka 3 (Isdhexgalka, Maaraynta Nolol-Xumada, 6D)
Heerka isdhexgalka ayaa la filayaa in heerka BIM ee 3, horaantii ka dib 2020 ay ka mid tahay rajooyin xooggan oo ah isku-dhafanaanta heerarka: Xogta Guud (IFC). Qaamuusyada Caamka ah (IDM) iyo Nidaamka Caadiga ah (IFD).
La qabsashada Lifecycle waxaa la filayaa inuu hogaamiyo Internet of Things (IOT), halkaas oo aan ahayn dhulka dushiisa oo keliya, laakiin sidoo kale mashiinka iyo kaabayaasha dhismaha qayb ka ah dhismayaasha, alaabooyinka loo adeegsado gaadiidka (alaabta dhaqdhaqaaqa), alaab guri, khayraadka dabiiciga ah, dhammaantood nolosha ee khuseysa tallaabada sharciga dadweynaha iyo kuwa gaar ahaaneed ee mulkiilayaasha, mashiinka, Designers iyo Maalgashadayaasha.
Marka laga hadlayo Bentley Systems, waxaan xasuustaa markaan ka arkay bandhigyadii 2013 ee London, isdhexgalka labada geeddi-socod ee Wareegga Qeexitaanka Mashruuca:
PIM (Tusaalaha Macluumaadka Mashruuca) Burbur - Fikradda - Qeexidda - Naqshadeynta - Dhismaha / Guddiga - Bixinta / Xiritaanka
AIM (Aqoonta Macluumaadka Hantida) Hawl - Isticmaal
Waa aragti xiiso leh, iyada oo la tixgelinayo in dhinacyadan ay ka imanayaan tobanka sano ee soo socota, laakiin in la sii horumariyo ayaa u oggolaaneysa jaangooyooyinka inay dhacaan. In kasta oo ay leeyihiin xalal badan oo toosan, jihada adeegga ee 'CONNECT Edition' jihaynta adeegga waxay abuureysaa xaaladaha Hub ee ku dhex jira hal deegaan oo Microstation uu yahay aaladda tusaalayaasha, ProjectWise aaladda maareynta mashruuca, iyo AssetWise qalabka maaraynta hawlgalka. , sidaas awgeedna la xirayo labada daqiiqadood ee muhiimka ah, Opex iyo Capex ee BS1192: 3.
Waxaa sidoo kale la filayaa in marxaladdan xogta loo tixgelin doono sida kaabayaasha, kaas oo u baahan in laydh loo qaybiyo, heer jaangooyo si buuxda loo isticmaali karo, iyo dabcan taas oo la heli karo xaaladaha dhabta ah ee la xiriira ka qaybgalka macaamiisha.
Cimilada Aqoonta leh waa dhiiri gelinta BIM
Caqabada BIM Heerka 3 ayaa ah in anshaxu uusan mar dambe isugu imaan qaababka feylka laakiin loo maro adeegyada ka imanaya BIM-Hubs. Leyli xiiso leh oo ka mid ah wuxuu noqon doonaa magaalooyinka casriga ah, oo horeyba u adeegsaday kiisaska sida Copenhagen, Singapoore, Johannesburg waxay sameynayaan isku dayo xiiso leh oo ay ku midoobayaan dowladda iyo dowladda, haddii aan isu oggolaano shuruudahaas. Laakiin sidoo kale waa caqabad xiiso leh, in jawigaas BIM Heerka 3, dhammaan waxqabadka aadanaha la moodo. Tani waxay tusineysaa in dhinacyada sida maaliyadda, waxbarashada, caafimaadka, iyo bey'adda ay ku jiraan meerto xiriir la leh maareynta meelaha. Dabcan, ma arki doonno layliyo shaqeynaya oo kuwan ka mid ah tobankan sano, xitaa waa su'aal haddii ay dhab ahaantii dhacaan muddada dhexe, haddii aan tixgelinno in himilooyinku yihiin in la hubiyo hagaajinta tayada nolosha dadka deggan meerahan -ama ugu yaraan magaalooyinkaas- iyo dib u soo kabashada waxyeelada loo qabo nidaamka deegaanka ee caalamiga ah -taas oo aan ku xirnayn dhowr magaalo-.
Inkasta oo Cimilada Smart aysan ahayn kaliya hareeraha geeska, waxa aad u maleynaya waxa dhacaya shirkadaha waaweyn ee gacanta ku haya tiknoolijiyada.
HEXAGON, oo leh helitaanka shirkado sida Leica ah ayaa xakamayn kara qabashada xogta berrinka, iyadoo helitaanka Erdas + Intergraph ay xakamayn karto qaabaynta qaab dhismeedka, hadda dhawaanahan waxay samaynaysaa qaab shaki leh oo AutoDesk ah si loo xakameeyo naqshadeynta, soosaarka iyo animation. Maaha in la xuso dhammaan shirkadaha ay ku jirto boqortooyadu, kuwaas oo dhammaantood loogu talagalay isla shay.
Dhinaca kale, Bentley wuxuu xakameynayaa naqshadeynta, howlgalka iyo meertada noocyo badan oo ka mid ah Warshadaha Dhismaha, Dhismaha, Rayidka iyo Warshadaha. Si kastaba ha noqotee, Bentley uma muuqato inuu xiiseynayo inuu ka xado meel ka mid ah kuwa kale, waxaanan aragnaa sida ay isbahaysi ula tahay Trimble oo iibsaday ku dhowaad dhammaan tartamayaasha la xiriira maareynta iyo qaabeynta, SIEMENS oo gacanta ku haysa warshadaha wax soo saarka iyo Microsoft kaas oo damacsan inuu u dhaqaaqo dhanka kaabayaasha xogta -in aan laga tagin, sababtoo ah deegaankan aragti-arag ah ayaa lumay Windows-ga Windows +-
Meel kasta oo aan ku aragno, shirkadaha waaweyni waxay ku sharfayaan BIM awooddeeda dhow ee saddexda faasas ee u wareejin doonta hawlgalka Magaalooyinka Smart: Means of Production, Infrastructure Supply and Innovation ee dalabyada cusub ee alaabada / adeegyada. Xaqiiqdii, waxaa jira xayawaanno waawayn oo u hartay si ay ula jaan qaadaan baloogyada, sida ESRI, IBM, Oracle, Amazon, Google, si aan u magacawno in yar oo aan ognahay inay xiiseynayaan qorshooyinkooda Smart Cities.
Way cadahay in ganacsiga soo socdaa uu yahay Smart Cities, oo hoos imanaya isdhexgalka BIM + PLM halkaas oo aysan jiri doonin Microsoft qabsata 95% suuqa. Tani waa qaab aad u adag, sidoo kale waa la sii ogaan karaa in shirkadaha aan ku khamaarin ganacsigan laga tagi doono sameynta CAD, go'yaal Excel iyo nidaamyada CRM ee xiran. Ganacsiyada isdhexgalka waa kuwa aan ku jirin meertada nololeed ee dhismaha, injineernimada, dhismaha iyo howlgalka (AECO); kuwa xakameynaya howlaha kale ee bini'aadamka ee hoos imanaya habka dhaqan-dhaqaale ee juquraafi ahaan, sida wax soo saarka, dowladda elektarooniga ah, adeegyada bulshada, wax soo saarka beeraha iyo wixii ka sarreeya maareynta tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ah.
GIS-ta waxaa lagu dari doonaa BIM iyadoo loo marayo aragtida Smart Cities. Waqtigan xaadirka ah waxay kudhowaad ku milmeen qabashada xogta iyo tusaalaynta, laakiin waxay umuuqataa inay wali leeyihiin aragtiyo kaladuwan; Tusaale ahaan, qaabeynta kaabayaasha dhaqaalaha ma ahan masuuliyada GIS, laakiin waxay si gaar ah ugu takhasustay falanqaynta iyo tusaalooyinka walxaha meelaha, saadaalinta xaaladaha, maareynta kheyraadka dabiiciga iyo dhamaan cilmiga dhulka. Haddii aan tixgelinno cabbirka lixaad (6D) ee xilliyada magaalooyinka caqliga leh, tirakoobka, isticmaalka, dib u warshadaynta iyo soo saarista tamarta ayaa muhiim noqon doonta, markaa waxay noqon doontaa awood loo baahdo oo hadda GIS ku sameeyo takhasus weyn. Laakiin si loo falanqeeyo awoodda biyo-abuurka ee wabiga, si loo ogaado inta wax soo saar ee ay lagama maarmaanka u tahay mitir cubic ah oo la taaban karo, waxaa jira farqi aad u weyn; kaas oo la buuxin doono illaa inta hawlgalku ka mid yahay wareegga wadaagga ah ee labadan maadooyin.
Waxaa jira waxyaabo badan oo in laga hadlo, waxaana rajeynayaa inaan sii wado taabashada mowduucan. Waqtigaan la joogo, xirfadlayaasha Geo-Engineering waxaa u haray caqabad ah inaan iskula jaanqaadno kuwa aan ka noqoshada lahayn oo aan wax ka baranno heerka farsamo, maxaa yeelay wali waxaa su'aal ka taagan tahay in Roadmap-ka lagu hirgelinayo BIM la sameyn karo iyada oo aan lagu tiirsanaan Kooxda Shaqada ee hogaamineysa. Iskusoo wada duuboo, maxaa yeelay BIM waa in laga arkaa laba aragtiyood: Mid waa tan waxyaalaha ay tahay in lagu sameeyo heer farsamo, tacliimeed, heer hawlgal, iyadoo la fiirinayo joogtaynta, ka dibna laga eego aragtida dawladaha, kuwaas oo rajo ka qaba meel aad u gaaban. , iyagoo ilaaway in awoodooda sharciyeed ay aad u gaabis tahay. Intaa waxaa sii dheer, kuwa ku sugan magaalooyinka horeyba uga fikiri kara Smart Cities, waxaa deg deg ah in diiradda la saaro muwaadiniinta, halkii laga isticmaali lahaa tikniyoolajiyadda.
🙂 Haddii xaaladdan ay rumowdo, riyada ka horreysa mid ka mid ah la-taliyayaashayda, oo rajeynaya inuu beero 3,000 oo hektar oo kaynta mahogany ah, oo ay weheliso wareeg nololeed la xaqiijiyay oo la xiriirta koritaankiisa, ayaa rumoobi doonta; marka waxaan aadi lahaa bangiga sanad oo aan deyn ka bixin karaa qaybta koowaad si tartiib tartiib ah loogu maalgeliyo inta hartay. 20 sano gudahood, waxaad heleysaa milyan mitir cubic oo hanti ah oo aad ku xallin karto ma aha oo kaliya hawlgabnimadaada, laakiin xitaa deynta dibadda ee waddankaaga.
Post Previous" Hore 5 Koorsooyinka internetka ee loogu talagalay Cadastre - aad u xiiso badan
Post Next 13 Sawirro taariikhi ah oo ku saabsan Ganacsi InsaanNext »